Mahafaly solonandrasana sy Saraha Rabearisoa : “Ilaina ny fanovana rafitra” -
AccueilRaharaham-pirenenaMahafaly solonandrasana sy Saraha Rabearisoa : “Ilaina ny fanovana rafitra”
Mahafaly solonandrasana sy Saraha Rabearisoa : “Ilaina ny fanovana rafitra”
24/10/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Fandaharana isaka ny amin’ ny 8 ora sy sasany ao amin’ny haino aman-jerin’ny On Air TV ny tapatapak’ahitra, hanomezana toerana ireo kandidà hanazavany ny vina sy ny programan’asany. Miara- dalana amin’ izany ihany koa ny fanabeazana ny olom-pirenena andeha hifidy, ary hanefa ny adidiny. Ho an’ny fandaharana laharana voalohany, dia ny kandidà laharana faha- 22, Mahafaly Solonandrasana Olivier sy Saraha Rabearisoa no hanokatra ny fandaharana. Noresahin’ireo kandidà ireo nandritra ny fandaharana omaly, ny fahitany ny toe-draharaham-pirenena misy ankehitriny, sy ny paika entina hampandrosoana an’i Madagasikara. Kandidà samy manana ny heviny ireo roa ireo, satria Saraha Rabearisoa izao dia tsy nanatrika ny fivorian’ ireo kandidà tetsy amin’ ny Ceni. Mahafaly Olivier Solonandrasana kosa dia isan’ny nanatrika ny fivoriana teny an-toerana. Mazava ny an’ny kandidà PLD, ny antony tsy nahatongavany nanatrika ny fivoriana, “tsy mahasolo tena ny vahoaka Madagasikara iray manontolo ireo kandidà, izao anisany. Noho izany dia tsy manana zo isika hanemotra ny fifidianana, izay hany ahafahan’ny Malagasy rehetra maneho ny heviny amin’ny alalan’ny latsa-bato” hoy izy.
Manana ny heviny manokana ihany koa ny kandidà laharana faha- 22, Mahafaly Solonandrasana Olivier manoloana ny fihaonan’ireo kandida tetsy amin’ ny Ceni Nanisana ny Zoma lasa teo ,“ manaiky ao fa misy ny tsy fahatomombanana eo amin’ny lisi-pifidianana, ary tsiahiviko etoana fa tsy hisy ny lisi-pifidianana lavorary. Araka ny nambaran’ ny Ceni Hery Rakotomanana, dia tokony hapetraka ny lisi-pifidianana biometrika raha toa ilaina izany fanarahana ny fenitra izany. Saingy kosa araka ny fanazavana ihany, dia haharitra aman-taonany ny asa tanterahina amin’ izany”, hoy hatrany ny fanamarihan’ity kandidà ity laharana faha- 22 amin’ ny bileta tokana ity. Hamehezana ny fandaharana omaly hariva niarahana tamin’ ny kandidà Mahafaly Solonandrasana Olivier sy Saraha Rabearisoa tao amin’ ny haino aman-jerin’ ny On Air Tv omaly dia ny hoe, samy resy lahatra ireo kandidà fa tokony hotanterahina ny fanovana rafitra izay nampitontongana ny firenena hatramin’ izao. Noho izany tsy ireo zava-misy ireo no atao antony, hanakanana ny Malagasy amin’ ny fotoana hanehoany ny safidiny, hoy hatrany Olivier Mahafaly Solonandrasana sy Rabearisoa Saraha.
ankara casper servis dans « Insécurité publique et disfonctionnements de nos institutions »
Fambolen-kazo : “Laharam-pahamehan’ny fitondram-panjakana”
Hampitomboina 40 000 hekitara isan-taona ny velaran-tany voavoly hazo, raha ny fanamby napetraky ny minisiteran’ny Tontolo iainana. Zava-dehibe tokoa mantsy ny fambolen-kazo satria dia iankinan’ny fiainan’ny zanak’olombelona iray manontolo. Izany indrindra no anton’ny hanamarihana isan-taona ...Tohiny
Depiote Tim : “Mpamadika ny Mapar”
Polisy misahana ny sisin-tany : “Tsy mpamono olona izahay”
Orinasa Madarail-MIKOROSY FAHANA TANTERAKA
ankara casper servis: https://myseoblogv9.wordpress.com/